कपिलवस्तुकाे महाराजगन्ज र विजयनगर पालिकामा महिला हिंसा विरुद्ध उर्लदो सयकरोड अभियान शुरु | Butwal Dainik
कपिलवस्तुकाे महाराजगन्ज र विजयनगर पालिकामा महिला हिंसा विरुद्ध उर्लदो सयकरोड अभियान शुरु
२०७७ माघ ३०, शुक्रबार (९ महिना अघि)
कपिलवस्तु , ३० माघ
विजयनगर गाउपालिकाको विभिन्न गाउँ बस्तीहरुमा महिला हिंसा विरुद्ध उर्लदो सयकरोड अभियान शुरु गरिएको छ । दलित सामाजिक विकास केन्द्र तथा केएर नेपालको साझेदारीमा संचालित अब मेरो पालो कार्यक्रमको सहयोग तथा किशोरी अभियान कर्मीहरुको अगुवाईमा यो अभियान शुरु गरिएको हो ।
विजयनगर गाउपालिका वडा न.ं३ पथरदेइया मा रहेको सिर्जनशिल किशोरी समुहको अगुवाईमा यौन हिंसा विरुद्ध किशोरीहरु अन्तर समुह सम्बाद कार्यक्रम गरि यो अभियान शुरु गरेका छन ।
कार्यक्रममा उपस्थित अभिभावक ,शिक्षक, धर्मगरु तथा पालिका प्रतिनिधीहरु महिला हिंसा विरुद्ध सामुहकि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो । त्यसै गरी यो अभियान विजय नगर गा.पा.वडा नं. ४ डालपुर, पनि अन्तर समुह सम्बाद कार्यक्रम गरी शुरु गरिएको किशोरी अभियान कर्मीहरुले जानकारी दिएका छन ।
यो अभियान भोली गाउपालिका को वडा नं. ५ छिताईडिहवा तथा वडा नं १ को जावाबैराठमा मनाईने कार्यक्रमका सामाजिक परिचालक प्रशुराम निगम तथा कस्तुरी अग्रहरीले जानकारी दिनु भएको छ ।
त्यसैगरी यो अभियान महराजगंज नगरपालिका वडा नं १ पिपरी, बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नं २ बडहरामा पनि शुरु गरिएको छ । हरियाली किशोरी समुह वाणगंगा ६ बैदौलीको अगुवाई यो अभियान भोली शुरु हुन लागेको कार्यक्रममाको सामाजिक परिचालक मीरा नेपालीले जानकारी दिनु भएको छ ।